यस कारण पूर्वराजासँग झस्किए राजनीतिक दलहरु - Sidha News
यस कारण पूर्वराजासँग झस्किए राजनीतिक दलहरु
काठमाडौं। झन्डै दुई तिहाइको सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डका किन एकै समयमा उही खाले अभिव्यक्ति आए ? उनीहरूले भनेजस्तै अहिले संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध खतरा देखिएकै हो त ? यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको विषय हो यो।
मूलतः तीन कारणले अहिले व्यवस्थाविरोधी चलखेल सुरु भएको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका छन्। पहिलो, आफ्नै पार्टीभित्रको एकतामा भएको ढिलाइ, दोस्रो, चुनावका बेला जनतामा बाँडेको जनअपेक्षाअनुसारको काम गराइमा देखिएको विलम्ब र तेस्रो, नेतृत्वमाथिको निरन्तर बढ्दो ‘आक्रमण’। आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा विस्तृतमा खबर छ ।